योगेश भट्टराईका अश्लील शब्द
नाकाबंदी मा मधेस आंदोलन जानु जरुरी थिएन। नाकाबंदी नै मुख्य समस्या हो, अरु केही समस्या छैन भन्ने हरुले कति चाडो बिर्सिन खोजेका? मधेसीको शांतिपूर्ण आंदोलन गर्ने अधिकार पुर्ण रुपले कुंठित गरियो। फ़ासिस्ट शैलीमा टाउको, छाती, पिठ्युँ ताकि ताकि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन का विपरीत र आफ्नै देशको सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत। प्रत्येक मधेसीको घर लाई नै जेल बनाइयो अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरेर।
नेपाल दुई राष्ट्र हो। एउटा राष्ट्र ले दिवाली मनायो, अर्को राष्ट्र मलामी गयो। योगेश भट्टराई जस्ता का मिलनविंदु का संभावना समाप्त पार्ने हरु नेपाल लाई औपचारिक रुपले नै दुई राष्ट्र बनाउन उद्दत देखिन्छन्।
मधेसको कुना कुनामा सशस्त्र पहाड़ी खड़ा गर्नुको अर्थ के? संविधान जारी गर्नु हप्तों अगाडि सशस्त्रलाई शुट एट साइट आर्डर जारी गर्नु को अर्थ के? आईसस को हो यो अवस्थामा?
नेपालमा जग्गा आफ्नो नाम मा हुन नागरिकता चाहिन्छ। अर्थात मधेसका भूमिहीन जति सबै नागरिकता विहीन छन। अर्थात नागरिकता विहीन नै भूमिहीन छन। योगेश भट्टराई जमीन्दार होइन र गरीब को पक्षमा बोल्ने मान्छे हो भने नेपालको नागरिकता समस्या, ५० लाख मधेसी लाई नागरिकता पत्र विहीन राखिएको अवस्था बारे मधेसी जमीन्दार किन बोलेको? किन लडेको? अझ योगेश भट्टराई का विरुद्ध किन लड्नुपरेको? हुनुपर्ने उल्टो होइन?
मधेसमा वर्गीय विभेद छ, लैंगिक विभेद छ, जातीय विभेद छ। त्यो विभेद पहाड़मा पनि छ, भारतमा पनि छ। विश्व भरि छ। अमेरिका मा छ। तर त्यो सबै खाले विभेद पहाड़मा छैन अलि अलि मात्र छ तर मधेसमा कहालीलाग्ने गरी छ भनेर योगेश भट्टराई ले के भन्न खोजेका? आफ्नो मधेस प्रतिको जातीय घृणा ले पहाड़मा रहेको चरम वर्गीय विभेद, लैंगिक विभेद, जातीय विभेद लाई ढाकछोप गर्न खोजेका?
उपनिवेशी बनाइएको समुदाय भित्र आतंरिक विभाजन अझ बढ़ी हुन्छ। त्यो एउटा वैज्ञानिक तथ्य हो। यदि मधेसमा तुलनात्मक रुपले पहाड़मा भन्दा बढ़ी वर्गीय विभेद, लैंगिक विभेद, जातीय विभेद छ भने त्यसको कारण नै योगेश भट्टराई पथ हो। मधेस लाई उपनिवेश बनाएर राखिएकोले हो त्यो भएको। समस्याका नाम ही योगेश भट्टराई है।
पहाड़ी सुरक्षाकर्मी ले मधेसमा गर्ने गरेका ज्यादती को आरोप सीमा पारि का लाई दिने काम गरेका छन योगेश भट्टराई ले। ठाडो अश्लील भाषामा। You can't protect your women भन्ने चरम रेसिस्ट भाषा को प्रयोग गरिएको छ।
काँध योगेश भट्टराई को हुन सक्छ। बन्दुक चलाउने मान्छे त त्यो हो जो गद्दीमा बसेको छ। जो झिंगा र आँप को भाषा बोल्छ।
मेरो चुनौती छ योगेश भट्टराई लाई। यस अवैध संविधानमा एउटा धारा मलाई देखाई दिनोस जहाँ मधेसी लाई बिभेद गरिएको छैन।
यो देश टुटने भाषा मलाई अपाच्य छ। यो भुमि तिम्रो बाउको बिर्ता हो र हामी ले लगे जस्तो गर्नु पर्ने? सर्बभौमसत्ता जनता मा हुनु भनेको के? त्यो पहिला ट्यूशन पढेर आउ। अनि कुरा गरौंला।
Constituent assembly constitution federalism Madhesh madhesi madhesi kranti3Nepal Terai yogesh bhattarai